Laanta Socdaalka oo magangalyo doonka ku faafinaysa daafaha wadanka | Somaliska
Laanta Socdaalka oo magangalyo doonka ku faafinaysa daafaha wadanka
Laanta Socdaalka (Migrationsverket) iyo kamuunada Sweden ayaa waxaa kala haystay dhibaato weyn oo ku saabsan halka laga furayo xeryaha qaxootiga. Laanta Socdaalka ayaa shirkadaha ka kiraysata xeryaha qaxootiga iyadoo aan horay u diidi karin haddii shirkad ay soo bandhigto xero buuxinaysa shuruudaha Laanta. Balse arintaas ayaa keentay in kamuuno yaryar oo tirada shacabka ku nool ay aad u yaryihiin ay soo duldegaan boqolaal qaxooti ah.
Isbuucaan ayaa Laanta Socdaalka ay shaacisay in ay xal u heleen arintaas, iyadoo aan shirkadaha laga ogolaan doonin in ay xeryaha qaxootiga ka furaan meesha ay doonaan balse la doonayo in lagu faafiyo daafaha wadanka. Shuruudaha lagu xirayo shirkadaha ayaa waxaa ka mid ah in la eego xaalada kamuunka, iskuulada, caafimaadka iwm in ay xamili karaan tirada qaxootiga ee xerada la geynayo.
Dowlada oo soo bandhigtay isbedalo ku wajahan dadka cusub
Nin dowlada ka dhunsaday lacag ku gaaraysa 60 milyan
Haddii aad af-soomaali wax ku turjumeysaan,si sax ah wax u turjuma.Maxaad ka wadaa kamuunada?ma gobolba,ma degmaa ma magaala?.
Asc saaxiib magacaaga waxaan u fahmay Cabdirisaaq inkastoo dadka badankood ay fahmeen magacaaga ma magac soomaaliyeed baa mise?????? tan kale waa runtaa maadaama soomaali badan oo caalamka ku firirsan ay ku xiran yihiin oo ay warbixinada kala socdaan erayga Kamuun waa degmo.